RACE အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（148.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် RACE: Rocket Arena Car Extreme
Action သည် Max ကိုလမ်းပေါ်ထွက်ပြိုင်ပွဲတွင်ပါ0င်သည်။
> 3D အန္တိမပြိုင်ပွဲတိုက်ပွဲများ, မီးသတ်ပွဲများတွင်ပါ0င်ပြီးရန်သူထံမှတိုက်ခိုက်မှုကိုတန်ပြန်ရန်အကာအကွယ်ဒိုင်းလွှားကိုအသုံးပြုပါ။ Nitro Boolk သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ သငျသညျထိုဓာတ်ငွေ့နင်းနှိပ်နေစဉ် turbo စုဆောင်းပြီးအခြားပြိုင်ကားကားများထားခဲ့ပါ။ ပထမ ဦး စွာအဆုံးကိုသင်မျောပါကလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသင်ဆုံးဖြတ်သည်။
နှင့်အားလုံးမြန်နှုန်းအထက်! r.a.c.e. - ဒုံးပျံ Arena ကားအစွန်းရောက် - အပြည့်အဝပေါက်ကွဲမှုများ, ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ Nitro ကိုနှိပ်ပါ - adrenaline ကို ပိုမို. ရယူပါ။ သင်၏ရန်သူများသည်ဖုန်မှုန့်များကိုရှူပါစေ။ နေ့ရောညပါပြောင်းလဲမှု, နီယွန်နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်လှည့်ကွက်များသည်သင့်အားပျင်းစရာကောင်းအောင်ခွင့်မပြုပါ။ သင်လှပသောဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဘရိတ်မပါ0င်လိုပါကဤသည်မှာသင်၏ပြိုင်ကားကားတစ်စီးဂိမ်းဖြစ်သည်။ Grassics Settings ကို Gameplay အရည်အသွေးနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့တိုးတက်စေရန်ဂရပ်ဖစ်ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်၏နဂါးထရပ်ကား, သင်၏နယ်ပယ်, Arena တိုက်ပွဲများတွင်ပါ0င်ပြီးအစစ်အမှန်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုသို့ချက်ချင်းရယူပါ။ သင်၏ရန်သူများကို Derben Arena တွင်မီးရှို့ပြီးမီးထောင်ချောက်များ, ကြီးမားသော morgensterns များ, ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်အခြားဖျက်ဆီးခြင်းအတားအဆီးများကိုပြုလုပ်ပါ။ ဒီပြိုင်ပွဲဂိမ်းဟာတကယ့်အရေးယူရုပ်ရှင်လိုပဲ! Rocket Arena Car အစွန်းရောက် (r.a.c.e. ) သည်ဘီးများပေါ်တွင်ရှင်သန်နေသောလူမျိုးများနှင့်တိုက်ပွဲများနှင့်တိုက်ပွဲများအတွက်မီးလောင်နေသည့်ကော့တေးဖြစ်သည်။
သမိုင်းကြောင်းအလိုက်ခေတ်တွင်တိုက်ပွဲများတွင်ပါ0င်သည်။ မတ်စောက်သောချောက်ကမ်းပါးအောက်တွင်ကားမောင်းခြင်းများကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်တွေ့ကြုံခံစားပါ။ ရှေးခေတ်အီဂျစ်အပျက်အယွင်းများနှင့်ကမ္ဘာ၏အခြားအံ့ဖွယ်အမှုများကိုလေ့လာပါ။ သင်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာကိုရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်သင်၏ခြေထောက်ကိုထိုင်ခုံပေါ်တွင်ထားပါ။
အကောင်းဆုံးရန်သူသည်ရိုက်နှက်ရန်ရန်သူဖြစ်သည်။ တိုက်ပွဲတိုင်းအတွက်ညာဘက်ထရပ်ကားကိုရွေးချယ်ပါ။ အရူးနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောမောင်းနှင်မှုသည်ဤပြိုင်ပွဲဂိမ်းတွင်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်, အကြောင်းမှာသင်၏ရန်သူများကိုရိုက်နှက်ရန်အန္တရာယ်များလိုအပ်သည်။ သင်၏ကြိုက်နှစ်သက်သည့်လက်နက်ကိုရွေးချယ်ပါ - ဒုံးကျည်များ, ဗုံးများ, စက်သေနတ်များနှင့်လျှပ်စစ်လက်နက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အချိန်နှေးကွေး။ ရန်သူများကိုသုတ်ပါ။ သင်၏အောင်မြင်သူ၏စိတ်ဓာတ်ကိုဟန်ချက်ညီစေရန်နှင့်ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိမကောင်းသောပြိုင်ပွဲဂိုဏ်းများသို့လှည့်စားသောပုခွေဒိတ်နေရာများသို့လမ်းပြရန်လမ်းညွှန်ပါ။
အကောင်းဆုံး Arena ပြိုင်ပွဲယာဉ်များ
သင်၏အဆုံးစွန်သောလမ်းပြိုင်ကားများကိုစုဆောင်းရန် Action-packed races နှင့် repars ဆုများရယူပါ။ သင့်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ယာဉ်များမှအများအားဖြင့်အများအားဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ အမေရိကန်ကြွက်သားကားများ, ဥရောပဂန္ထဝင်နှင့်ဂျပန်ပျံ့မော်တော်ယာဉ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကားတစ်စီးစီသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များအားအမြင့်ဆုံးပျက်စီးစေဖို့လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ဘီးပေါ်ရှိ Monsters သည်လမ်းမများနှင့်မဆိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်ကတ္တရာစောင်းကိုဒေါသထွက်စေခြင်းငှါ၎င်း,
ယာဉ်များအဆင့် -ups စနစ်
ယာဉ်တိုင်းသည်အဆင့် 30 အထိမြင့်တက်နိုင်သည်။ ယာဉ်တစ်စီးသည်အဆင့် 10 နှင့် 30 အထိမြင့်တက်လာသောအခါပြိုင်ပွဲနှင့်စစ်ပွဲများကိုတိုးတက်စေသည့်ထူးခြားသောခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်းများရရှိသည် ပိုမို. ပင်စွမ်းဆောင်ရည်။
ပျော်စရာကိုရပ်တန့်ရန်စွမ်းအင်စနစ်များမရှိဘဲအဆုံးမဲ့နဂါးထရပ်ကားပြိုင်ပွဲ! အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဝက်လောက်အပြည့်အ0မကျဘူးလားဆိုတာမင်းစဉ်းစားဖူးလား။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ဂိမ်းတွင်အပြုသဘောဆောင်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - တင့်ကားသည်အမြဲတမ်းပြည့်နေ၏။ သင်၏ကားကိုစတင်ရန်အတွက်စွမ်းအင်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်နာရီများစွာစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ အကန့်အသတ်မရှိအစွန်အဖျားအစွန်အဖျားတွင်အပြည့်အဝအပြည့်အဝအလျင်အမြန်လုပ်နိုင်သည်။
စစ်တိုက်ခြင်း Royale ပြိုင်ပွဲဂိမ်း - အားလုံးဆန့်ကျင်ရေးပွဲစဉ်။ ကစားသမားများစွာသည်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်လာရန်နှင့်အဓိကဆုလာဘ်ကိုရယူရန်နှင့်အဓိကဆုလာဘ်ကိုရယူရန်ဖြစ်သည်။
Music သည်ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံကိုခံစားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပြိုင်ပွဲများအတွင်းမြန်နှုန်းနှင့်ပေါက်ကွဲလွယ်သောယှဉ်ပြိုင်မှု။
လက်တွေ့ကျသော 3D ဂရပ်ဖစ်
လက်တွေ့ကျသော 3D ဂရပ်ဖစ် - စစ်တိုက်ခြင်း Royale Style Racing
ပြိုင်ပွဲဝင်သည့်ပြိုင်ပွဲဝင်လှုပ်ရှားမှုများ - စစ်တိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် - ပြိုင်ပွဲကားများအထူး mode: ပြိုင်ပွဲများ - အကြီးမြတ်ဆုံးဆုလာဘ်များအတွက်ပြိုင်ပွဲ
ဘာအသစ်လဲ RACE: Rocket Arena Car Extreme 1.0.51
- Camera range setting
- Bug fixes on levels
- Control buttons lost fix
- Battles mode. Changed in-game balance
race rocket arena car extreme |race rocket arena car extreme(early access)gameplay android
AV Monster Gaming
RACE: Rocket Arena Car Extreme | Gameplay Android | New Mobile Game|
RACE: Rocket Arena Car Extreme - Gameplay Walkthrough Part 1 (Android, iOS)
GAMEPLAY RACE : Rocket Arena Car Extreme || RACING SINGLE PLAYER || - HetS 1991
Destroye All Enemy, RACE: Rocket Arena Car Extreme Day2Android GamePlay #2